Iitattoo zeViking: amaqhawe kufuneka akhuthazwe | Ukuzoba
Iitattoo zeViking: amaqhawe ekufuneka ephefumlelwe
Mva nje sithethile kakhulu ngeeViking tattoos, ngaphandle kwe I tattoo yesimboli kula magorha ayimbalasane okanye iiTattoo zeNordic, apho besithetha ngemiba eyahlukeneyo yokusebenzisa ezi tattoos.
Namhlanje siza kuthetha ngento eyahlukileyo kwiiTattoo zeViking: amagorha anobukrakra wentsomi esinokufumana inkuthazo kuye. Ezinye ziyaziwa, ezinye azikho kangako, kodwa zonke ziimpawu eziphambili zamabali amelweyo kumvambo.
1 Odin, ukufa kunye nemibongo
2 Thor ngesando esipholileyo
3 IValkyries, amajoni aneengcwangu
4 ULoki, uthixo weqhula
5 UFreya, uthixokazi wothando kunye nemfazwe
6 USiegfried, iqhawe elabulala inamba elihlwempuzekileyo
7 URagnar Lodbrok, iViking evela kwiTV
8 U-varvar-Oddrm, iqhawe le-jinx
Odin, ukufa kunye nemibongo
Abalinganiswa bokuqala esinokuzoba kubo umvambo ngu-Odin. U-Odin ngumfo onzima olwa nomkhonto kunye nehashe lakhe elithembekileyo elinemilenze esibhozo, uSleipnir. Uhlala kwibhotwe Asgard, apho ubona yonke into eyenzekayo kwihlabathi ezisithoba kwitrone yakhe.
U-Odin unguthixo ophawu lokuvutha komsindo wakhe. Mhlawumbi yiloo nto enguthixo wemfazwe, kodwa, ngokumangalisayo, yimibongo kunye nokubalisa amabali. Kuyatshiwo ukuba uyakukhokela oothixo baye esiphelweni sehlabathi kwaye ingcuka uFenrir iyakumqwenga.
Njenge tattoo, I-Odin isebenza ngokumangalisayo ngenxa yezinto ezenza yahluke (Ipatch, umzekelo). Khetha uyilo lwenyani, mnyama-nomhlophe ukuyinika ithoni yedrama kunye nedrama.
Thor ngesando esipholileyo
I-Thor yaziwa kakuhle kubo bonke (ngokuyinxenye sibulela kwi-blond Marvel). Ngesando sakhe, uTor unamandla ngaphezulu kwezityalo kwaye, nangona ngesando sakhe enokutshabalalisa izihlwele, ebehlala enoxolo kwaye ekhusela.
Inyaniso enomdla kukuba Ukuzinikela ku-Thor wacela umngeni kubathunywa bevangeli abangamaKristu abafuna ukuguqula amaJamani ewe okanye ewe kwinkolo yakhe kangangamakhulu eminyaka ngenxa yesando sakhe, esaba likhubalo (hayi ubukhulu bobomi, ewe) ngenxa yokuthembeka kwakhe.
Kwi tattoo UThor, njengo-Odin, unethamsanqa lokufumana into (isando) emenza ukuba abonakale kwangoko, onokukhetha kuzo zombini uyilo oluphefumlelweyo zii-comics kunye neminye imithombo yendabuko ngakumbi okanye uyile ngokwakho okanye ngumculi we tattoo.
IValkyries, amajoni aneengcwangu
Elinye lawona manqaku anomdla eNordic ukuba aphefumlelwe iitatoo zeViking ziiValkyries, amajoni angazani nantombi alwa nezinyo kunye nezipikili. Nangona kukho iiValkyries ezininzi ezinamabali anomdla kakhulu, eyaziwa kakhulu nguBrunhilda, ophambili we Iringi yeNibelungs.
Eyona ndlela ixhaphakileyo yokumela iitatoos kukuba intombi ikhwele ihashe eliphaphazelayo., exhobe ngomkhonto nangesaphetha, kunye neengubo ezinde kunye nezixhobo zokulwa. Ziziqwenga ezibonakala zintle kwiindawo ezinje ngasemva ukuba zinkulu kwaye ziyilo lomboniso.
ULoki, uthixo weqhula
Ngubani omnye umntu omncinci omaziyo uLoki, ngokuyinxenye, kwakhona, enkosi kuMarvel, apho Ungumntakwabo Thor kwaye ngamanye amaxesha uchasene. Ekuqaleni, uLoki wayeqwalaselwa, ewe, imvelaphi yazo zonke iinkohliso. Nangona kunjalo, ungumntu ogqunywe yimfihlakalo ukusukela, nangona ebonakala kwiintsomi ezininzi njengonyana wezigebenga ezibini ezamkelwe nguOdin, ngokwesiko akakhonzwa.
Xa kuziwa ekutsaleni inkuthazo kwi tattoo, kuqhelekile ukufumana uMarvel's Loki njengomntu ophambili (nokuba yeyokuhlekisa okanye yemuvi, edlalwa nguTom Hiddleston), kunye nesigcina-ntloko sakhe esikhulu esineempondo kunye nemibala yakhe etyikityiweyo, eluhlaza kunye negolide.
UFreya, uthixokazi wothando kunye nemfazwe
Omnye wabalinganiswa ababaluleke kakhulu kwiintsomi zeViking, kunye nomgqatswa ogqibeleleyo weetattoo zeViking, nguFreya, isithixokazi sothando, ukuzala, isini kunye nemfazwe. Kuthiwa lo thixokazi ulawula iFólkvangr, intsimi entle apho isiqingatha sabantu bethu siya emfazweni (esinye isiqingatha siya eValhalla, ngokuqinisekileyo okuvakala kukuqheleka ngakumbi kuwe, kwisizinda sikaOdin).
Njenge tattoo unokunika uFreya umnxeba opholileyo kunye nenqwelomoya yakhe, yeyona ilungileyo emhlabeni kwaye leyo ibangela uloyiko olukhulu kwiintshaba zakhe ukusukela, utsalwa ziikati ezimbini! Uqhula ecaleni, lo thixokazi usetyenziselwa ukumela yena ngeenwele ezinde ezimhlophe kunye nesimo sengqondo sokwenyama kuba uzithatha njengothixokazi wesini nothando.
USiegfried, iqhawe elabulala inamba elihlwempuzekileyo
Elinye lamaqhawe aziwayo eViking nguSiegfried, owayehlala kwiindawo ezininzi ezonwabisayo, kodwa eyona idumileyo yeyonanto yamkhokelela ekubeni afumane ubuncwane obugadwe nguFafnirInamba eyalinda ubuncwane beNibelungs (inene, ukuthandwa kwayo kufanelekile Iringi yeNibelungs). Imbali ithi uSiegfried oselula wakhula nomkhandi weentsimbi owamfundisa ukubulala irhamncwa eloyikekayo: ngekrele wahlaba entliziyweni yakhe wahlamba kwigazi likaFafnir elihlwempuzekileyo ukuze azenze angoyiseki.
I-Siegfried ilungele ezo tattoos ezifuna ukuzixhasa kule legend ukufezekisa uyilo olungaqhelekanga.: ukubulawa ngokugwenxa kweViking, okanye ukuhlamba egazini, lenamba. Ngokuqinisekileyo luyilo olunomtsalane olunokulandela isitayile esisinyani.
URagnar Lodbrok, iViking evela kwiTV
Mhlawumbi emva koVicky iViking elona gorha laziwa kakhulu emantla URagnar Lodbrok (igama lokugqibela eliguqulela kakuhle njenge 'breeches ezinoboya', kuba wasebenzisa loo ngubo ibuyisa umlilo ukubulala iidragons ezimbini, ekubonakala ukuba yayiyinto yokwenza umdlalo ngelo xesha), ophambili kuthotho Iindwendwe. Unyana kaKumkani waseSweden, uRagnar waye sisibetho saseNgilani naseNormandy ngenxa yemisebenzi yakhe emininzi kula masimi.
Kuyabonakala, Iiteki zeRagnar zibulela kakhulu kwindima yakhe kuthotho lweTV. Nangona kunjalo, ukuba ufuna indlela yoqobo engaphezulu, unokuphefumlelwa uyilo olusekwe kweminye imithombo kunye nemizekeliso, okanye uzenzele ngokwakho.
U-varvar-Oddrm, iqhawe le-jinx
Ukuba kukho iqhawe le-jinx kuyo yonke intsomi yaseNorse, yi-Norvor-Oddrm yaseNorway. Ibali lakhe liqala xa, njengomntwana, imboni iprofeta ukuba ihashe layo liza kumbulala kwilali yakhe yokubulala. Oku kubangela u-varrvar-Oddrm ukuba athathe isigqibo sokubulala ihashe elihlwempuzekileyo ukuze isiprofetho singazaliseki kwaye athathe isigqibo sokubaleka ekhaya. Iqhawe liqala iindwendwe ezininzi kuyo yonke le minyaka, kude kube, liqhutywa lilishwa, libuyela ekhaya. Xa etyelele ingcwaba lehashe lakhe, uyasigculela isiprofeto, ukhubeka ekhakhayini, apho inyoka iphuma khona imlumayo kwaye, ewe, uyafa.
Ibali lakhe lilungele kungekuphela nje ukumbonisa njengegorha elinoburharha, kodwa nokusebenzisa izinto ezimnyama ezinje ngokakayi nenyoka kuyilo, elinokufuzisela uluvo lokuba umntu akanakusinda kwilishwa okanye ekufeni.
Iitattoo zeViking ziphefumlelwe ngamagorha aneengcwangu kunye nabalinganiswa abadumileyo abazinikele ekuhlaseleni, ekulweni kunye nokubulala iidragons, kwaye baye bashiya amabali abambekayo kwizizukulwana ezizayo. Sitshele, ngaba ukhe wakhuthazwa nayintoni na ngesiqwenga? Ngubani oyithandayo? Sazise ngezimvo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iimpawu zeTattoos » Iitattoo zeViking: amaqhawe ekufuneka ephefumlelwe
I-Zelda tattoos, uninzi lwamathuba anjengee-rupees engceni
Iimpawu zikaYesu Krestu, uzifumanise nzulu